Mpanamboatra sy mpamatsy Roding Carbide China | Mingtaishun
Fihenam-bidy mahazatra hatramin'ny farany - 55 HR ...
YG10XAmpiasao betsaka, amin'ny hamafin'ny hafanana tsara. Mety amin'ny fikosoham-bary sy fandavahana vy ankapobeny eo ambanin'ny 45 HRC sy Aluminium, sns amin'ny hafainganam-pandeha ambany. Amporisiho ny fampiasana ity naoty ity mba hanaovana ny fanaingoana, ny famaranana fikosoham-bary, sns.
ZK30UF Mety amin'ny fikosoham-bary sy fandavahana vy ankapobeny eo ambanin'ny HRC 55, vy vy, vy vy, firaka aliminioma, sns.
GU25UF Suitble amin'ny fikosehana firaka titanium, vy mihamafy, firaka marefo eo ambanin'ny HRC 62.
Manoro hevitra mba hanao milina famaranana misy haingam-pandeha haingam-pandeha.
Miezaka ny hanana hatsarana, fanatsarana tsy tapaka ary fanavaozana izahay, dia manolo-tena hahatonga anay ho "fahatokisan'ny mpanjifa" sy ny "safidy voalohany amin'ny mpamatsy marika ny kojakoja milina enti-miasa" Safidio izahay, mizara toe-javatra mandresy!
Ny kalitaon'ny vokatray dia mitovy amin'ny kalitaon'ny OEM, satria ny ampahany ifotony dia mitovy amin'ny mpamatsy OEM. Ireo vokatra etsy ambony dia nandalo fanamarinana matihanina, ary tsy vitan'ny hoe afaka mamokatra vokatra manara-penitra OEM isika fa manaiky ihany koa ny baiko namboarina.
Miaraka amin'ny vokatra kilasy voalohany, serivisy tena tsara, fandefasana haingana ary ny vidiny tsara indrindra, nahazo fandresena be izahay mpanjifa vahiny '. Ny vokatray dia aondrana any Afrika, Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana ary faritra hafa.
Tanjona orinasa: ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tanjonay ary manantena fatratra ny hanana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa mba hampivelatra ny tsena. Miara-manangana rahampitso mamirapiratra! Ny orinasanay dia mihevitra ny "vidiny mirary, ny fotoana famokarana mahomby ary ny serivisy aorinan'ny varotra tsara" ho toy ny foto-kevitray. Manantena izahay fa hiara-hiasa amin'ny mpanjifa bebe kokoa ho an'ny fampandrosoana sy tombontsoa. Miarahaba antsika mpividy mety hifandray aminay izahay.
Ny ankamaroan'ny olana eo amin'ny mpamatsy sy ny mpanjifa dia vokatry ny tsy fahampian'ny serasera. Ara-kolontsaina, ny mpamatsy dia mety tsy sahy manontany zavatra tsy azony. Izahay dia mamaky ireo sakana ireo mba hahazoana antoka fa tonga amin'izay tadiavinao amin'ny ambaratonga antenainao ianao rehefa tianao izany. Fotoana fanaterana haingana kokoa ary ny vokatra tadiavinao dia ny Criterion-nay.
Teo aloha: Tsorakazo karbida simenitra
Manaraka: 45 HRC NC fitsikilovana fizahana